crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Muuqaallada | HimiloNetwork
Himilo July 4, 2022	Leave a comment 4 Views
Muxuu yahay Car-jitsu oo kamid ah hababka cusub ee dadku u legdamo? Maxaase xiisa ah oo ku jira legdankaas? Muuqaalka hoose kaga bogo.
Himilo June 23, 2022	Leave a comment 16 Views
MUQDISHO (HN) –– Noloshu uma sahlna qof walba. Mana jirto doorasho qof walba uu u heli karo sida iyo goobta uu ku noolaanayo. Waana sheekada Farman Ali – kaas oo 8 sannadood ku noolaa geed dushiisa – midka iftiiminaya. Halkan hoose ka daawo.
Daawo – 70 jirkii 13 ilbiriqsi ku orday 100 mitir.
Himilo June 16, 2022	Leave a comment 9 Views
MUQDISHO (HN) — Tartanka Orodadu malahan da’ u gaar ah. Haddii aad caafimaad qabtid oo jir ahaanna aad u diyaarsan tahay inaad orodo, waad ka qeybgali kartaa. Waana sheekada 70 jirka soo aadan oo 100 mitir ku orday muddo ka yar 15 ilbiriqsi midda tusaale nool kuu ah. Halkan hoose haddaba ka daawo.
Daawo – Geedaha Afar-geesoodka ah.
Himilo June 16, 2022	Leave a comment 14 Views
MUQDISHO (HN) — Geedaha waxaa aalaaba lagu gartaa summado lagu baadisooco oo ah muuqooda dhererka iyo midabkooda cagaaran. Laakiin, halka geedaha oo dhami ay si dhuuban u baxaan, waxaa jira geedo dhif ah oo afartooda dhinac iskala eg oo ku yaalla dalka Panama. Halkan hoose haddaba ka daawo.
Himilo February 27, 2021	Leave a comment 245 Views
MUQDISHO (HN) — Saxaafaddu waa mid kaliya shaqooyinka ugu halista badan ee laga shaqeeyo. Muqaalka soo aadanna wuxuu caddeynayaa sida suxufiyiinta qaar ee sameynaya tebinta tooska ah ay ula kulmi karaan dhac, dil ama xattaa afduub. Wuxuuna ku saabsan yahay wariye isaga oo ku jira tebin toos ah lagu qabanayo biskoolad si looga qaato mobilka iyo wixii agab qaali ah ...
Laacibka Steve Janson oo qaatay Islaamka.
Himilo February 2, 2021	Leave a comment 317 Views
MUQDISHO (HN) –– Steve Janson oo ahaa laacib hore oo kubadda Kolayga Maraykanka ee NBA ka dhigay wacdaro iyo taariikh cusub ayaa qaatay diinta Islaamka. Haddaba halkan ka daawo isaga oo loo qabanayo shahaadada.
Daawo – Walaal Norwegian ah oo Ilmada ceshan waayay markii loo qabtay Shahaadada!
Himilo February 2, 2021	Leave a comment 413 Views
MUQDISHO (HN) — Islaamku waa diin dhammeystiran nolol ahaan. Walaal walba oo macaankeeda ku dareema hidaayada Eebe uu la doono qalbigiisa waxay ka keentaa oohin iyo nugeyl qalbi oo uu la ceshan waayo ilmada kasoo qubata. Muuqaalka soo aadan, wuxu ku saabsan yahay mid kamid ah walaaladaas oo u dhashay dalka Norwey oo dhawaan kusoo biiray bulshada Islaamka. Halkan haddaba ...
Himilo November 3, 2020	Leave a comment 283 Views
MUQDISHO (HN) — Guurku aalaaba waxaa loo fishaa mid lammaanuhu ay nolosha iskula dhammeystaan farxad iyo jaceyl. Balse taasi uma suura-gelin dad badan sida Cassey oo guursatay 10 jeer si ay u hesho qofkeedii saxda ahaana go’aansatay inaysan marnaba joojin guursiga. Haddaba halkan ka daawo muuqaal ku saabsan.
Daawo – Ninka sida Daanyeerka u socda.
Himilo July 13, 2020	Leave a comment 698 Views
MUQDISHO (HN) — Qaar badan oo dadka kamid ah ayaa jecel daawashada iyo xanaaneynta xayawaanada siiba daanyeerka, laakiin waa dhif in la helo qof sida daanyeerka inuu u socdo jecel marka laga reebo 50 jir Shiinees ah oo 30kii sanno ee lasoo dhaafay caadeystay inuu qaab socodka Daanyeerka iska yeelo. Sida Daanyeerka ayuu u socdaa hadiyo jeer.
Daawo – Hagia Sofia oo markii ugu horreysay bannaankiisa hore lagu dukaday!
Himilo July 13, 2020	Leave a comment 475 Views
ISTANBUL (HN) — Ku dhawaad muddo qarni ah kaddib, Muslimiinta Turkiga ayaa awoodi kara inay hadda kaddib Salaadaha ku dukadaan gudaha iyo hareeraha Masjidka Hagia Sofia oo 85 sanno Matxaf qaran ahaa. Kaddib go’aankii lagu sheegay in hadda laga bilaabo Hagia Sofia loo aqoonsado Masjid, kumaankun Muslimiin ah ayaa isugu soo baxay si ay ugu dukadaan bannaanka hore ee Hagia ...
La kulan – Ragga u lebista sida Maalqabeennada balse ku hoyda Guryaha Danyarta.